Madaxweynaha marekanka oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay Xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad taariikhi ah ka jeediyay xarunta Midowga Afrika, isagoo ugu baaqay Hogaamiyeyaasha Afrika inay horumariyaan dimoqraadiyada.
Obama ayaa noqday Madaxweynihii u horeeyay ee Mareykan ah oo khudbad ka jeediya Xarunta Midowga Afrika, waxaana uu ka hadlay arrimaha musuq maasuqa iyo xukun jaceylka lagu yaqaano Madaxda Afrikaanka.
“Haddii aniga mar saddexaad aan xilka isku soo taago waxaa hubanti ah in la ii dooran doono, laakiin sharcigeena sidaas ma ahan, haddii xiliga kuu dhamaado waa inaa xafiiska ka tagtaa”ayuu yiri Obama.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu halis ku jiro waxa uu ugu yeeray Horumarinta Dimoqraadiyada, waxaana uu uga digay Madaxda Afrikaanka inay isku dhejiyaan xukunka.
Waxaa uu sheegay in horumarka qaaradda uu ku xiran yahay horumarinta dimoqraadiyada, xuquuqda aadanaha iyo xornimada sida uu yiri.
“Sida Afrika ay ugu taagan tahay ka hortagida argagixisada iyo colaadaha, ayaa waxaa rabaa inaa u ogaataan in Mareykankana uu idin garab taagan yahay”ayuu yiri Obama ka yiri Xarunta Midowga Afrika ee Addis Ababa.
Madaxweyne Obama ayaa tusaale u soo qaatay marka ay Madaxda diidaan inay kursiga ka degaan, gaar ahaan arrinta ka dhacday Burundi oo Madaxweyne Pierre Nkurunziza uu wax ka bedel ku sameeyay dastuurka
Sidoo kale waxaa uu ka hadlay Kooxaha Al-Shabaab iyo Boko Haram inay sheegtaan magac diimeed, balse ay gacan ku dhiiglayaal yihiin, waxaana uu intaa ku daray in Islaamka uu yahay Nabadda, ayna og yihiin malaayiin Muslimiin Afrikaan ah.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta soo gaba gabeynaya booqasho qaadatay shan maalmood oo uu ku marayay dalalka Kenya iyo Itoobiya.